Daraasiin dad ah ayaa mudaaharaad nabdoon ku qabtay magaalada Sioux City ka dib rabshado ka dhacay | KWIT
Waxaa la sheegay in 50 dibadbaxayaal ah la dilay. Dowladda Itoobiya ayaa xidhay internet-ka, taasoo adkeyneysa isgaarsiinta iyo ceymiska.
Caafimaadka Siouxland Health Health waxay soo weriyeen in hal dhimasho oo dheeri ah ay sabab u tahay COVID-19, nin da 'weyn oo da’diisu u dhaxeyso 61 ilaa 80 jir wadarta guud 44 ka mid ah Gobolka Woodbury. Waxaa jira dhowr iyo toban kiis oo cusub oo ah 3,172.
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha waxay muujineysaa shan dhimasho oo dheeri ah muddo 24-saac gudaheeda ah iyo in kabadan 300 oo natiijooyin tijaabo ah. Waxaa jiray 717 dhimasho gobolka oo dhan iyo in kabadan 29,400 xaaladood oo togan.
Baadhitaan cusub oo lagu sameeyay hogaamiyaasha ganacsatada ayaa muujinaya in dhaqaaluhu uu bilaabay inuu soo kabto iyadoo meheradihii dib loo furay bishii la soo dhaafay sagaal Gobollada Midwest iyo Plains, oo ay ku jiraan dhammaan saddexda Siouxland.
Tixraaca guud ee gobolka ayaa u booday dhul togan oo ah 50.3 bishii Juun laga bilaabo Maajo 43.5. Dhibco kasta oo ka sareysa 50 waxay muujineysaa koritaan, halka dhibcaha ka hooseeya 50 ay muujinayaan hoos u dhac.
Degmo Dugsiyeedka Bulshada Magaalada Sioux waxay ku dhawaaqday qorshayaal loogu talagalay iskuulada xagaaga ee heerarka fasalada qaarkood.
Waxaa ku jira ardayda galaya fasalada koowaad, labaad ama 8aad waxay aadi doonaan fasallo dhawr saacadood ah maalintii laga bilaabo 3-da Ogosto ilaa 14-keeda. Waxaa sii dheer, ardayda da'da ah ayaa iska qoray koorsooyinka xisaabta qaarkood sida Aljebra iyo Joometri.
Kormeeraha guud ee degmada ayaa leh darajooyinka iyo xiisadaha ayaa seegay macluumaad muhiim ah si ay uga caawiyaan dadaallada mustaqbalka ee waxbarasho.
Qorshaha “Dib-ugu-noqoshada-waxbarashadda” degmada waxaa sidoo kale ku jira barashada shaqsi ahaan ama khadka tooska ah ama isku-darka labada waxayna kuxirantahay horumarka faafa ee COVID-19.